Ukugqibelela kweBrand xa kuthelekiswa neSantya soMxholo | Martech Zone
NgeCawa, Agasti 19, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Kukho umceli mngeni kwimibutho ekhubazekileyo ngoku. Ngu isantya. Amasebe entengiso ahlala egugile kwaye atyhale umxholo ngaphandle ngokukhawuleza ayachuma. Amasebe ezentengiso akhubazekile ngenxa yohlobo olugqibeleleyo ayasilela. Yintetho endala yofudo nomvundla.
Ufudo lusoloko lusebenzisa impumelelo. Iinkampani eziyile ngokucacileyo, imiyalezo egqibeleleyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo ziyenze yaya phezulu. Iinkampani ezingenalo uphawu oluqinileyo ziya kushiywa ngasemva… zingathembakali kwaye zingabonwa njengoko uphawu olugqibeleleyo lubile ukubonwa kunye nomdla wethemba labo.
Indawo yentengiso iguqukile, nangona kunjalo, kwaye ngoku abathengi banxibelelana kwaye baphanda ngokuthenga kwabo okulandelayo, benika isaziso esincinci (okanye ikhredithi) kuhlobo lwentengiso. Endaweni yoko, bafuna ingcebiso kubahlobo nakusapho, uphononongo kubantu ongabaziyo, kwaye bafuna ukuvula incoko kunye nenkampani endaweni yokuyalelwa kwilizwi okanye i-imeyile. Bafuna iimpendulo, hayi iilogo ezintle, iiwebhusayithi, iintengiso kunye neziqubulo.
Imidyarho imfutshane kwaye iihares ngoku ziyaphumelela. Iimpawu ezingafezekanga ziyaxhaswa- kwaye ziyachuma kule mihla- ukuba inkampani yabo ibonelela ngethemba ngexabiso kunye nokuqonda. I-logo, isiqubulo kunye nemveliso entle ayonelanga kule mihla yokutsala abantu. Endaweni yoko, iqela elinika isikhokelo kunye nobunkokeli lixabiseke ngaphezulu kwemveliso uqobo.
Ke ngoku yintoni? Ufudo olufezekisa uphawu okanye umvundla wesantya somxholo ophumelela ugqatso?
Ndicinga ukuba umvundla uphumela ngaphandle kufudo. Amanqaku ayinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso sakho sonke, kodwa xa ukufezekiswa kwelo phawu kukuthintela amandla akho okunxibelelana nabo bafuna kwaye balinde ukwenza njalo, awuhlangabezani nolindelo lwentengiso yakho. Intengiso ifuna ukuba unxibelelane nabo rhoqo ukubonelela ngexabiso.
Imakethi ayifuni ukugqibelela, ifuna iimpendulo. Iimpawu ezinkulu zisenokuphumelela, kodwa ngaphandle kokuba zithathe ukurhabaxa komvundla. Iihares zinokuqhuba itoni yeshishini… kodwa kufuneka zilulungele uphawu lwazo ngokuhamba kwexesha.
Eminye imizekelo yeBrand ngaphezulu kwesantya:
Iinkampani ezithela ngaphezulu kuyilo lwe-infographic kangangeenyanga ukuze zilungise zonke iinkcukacha. I-infographics kwabelwana ngayo ngokusekwe zombini uyilo kunye nedatha. Yonke i-infographic ayizukuhamba yintsholongwane. Fumana i-infographic phaya, funda kwiziphumo, kwaye uqalise ukuyila elandelayo. Ukufumana isiqingatha seshumi infographics kwintengiso ebonakala intle kunokuba ungafumani nanye phaya.
Iinkampani ezixakeke kakhulu kukubalisela ibali eligqibeleleyo kangangokuba bayikhathalele into yokuba umfundi akajonganga bali kwaphela. Banengxaki kwaye bajonge into yokuyilungisa. Ukuba uyayilungisa, baya kuthenga. Ukuba konke onako ngamabali, uza kuphulukana neshishini kwabo baneempendulo.
Iinkampani ezinendawo eyaziwa njenge-crappy iwebhusayithi engasebenziyo, emathidala ukutsala umdla wokupapasha iwebhusayithi entsha ebhetele… kodwa engafezekanga. Kuyamangalisa ukuba usebenza ekuyileni ubuncwane, kodwa ngoku ufuna nje into esebenzayo. Yenze isebenze, phucula njengoko usiya.
Iinkampani zihlala zingakhathazeki ngesantya kuba zinendlela encinci yokulinganisa ingeniso abaphulukana nayo. Njengoko sisebenza kunye neenkampani ukubatyhalela ukuba batyhale ngakumbi, sihlala sikhathazekile sisixa sabantu abaphazamisayo, ngakumbi ngokusekwe kwimfezeko, ngaphambi kokuba baphile. Nje ukuba siphile, nangona kunjalo, inkampani ihlala ibuya kwaye ithi… Akwaba besikwenzile kwezi nyanga zidlulileyo.
Andikukhuthazi ukuncama igama lakho. Ndikhuthaza ulungelelwaniso phakathi kwesantya kunye nophawu ukuze ukwazi ukwandisa nokwandisa zombini ukuphucula iinzame zakho zokuthengisa.
tags: uhloboUkuThengiswa kweMpahlaImidiya yokuncokolaisantyaqhinga
Iimpawu zokuqala zeWebhusayithi